:Bọchị: Jenụwarị 15, 2020
Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmeghe nke Smart Cities na Nnọchianya Ndị Isi Obodo na Ngosipụta, Murat Kurum, Minista gburugburu na obodo mepere ụfọdụ ozi banyere Channel Istanbul Project. Minister nke ulo oru, "Kanal Istanbul, mgbe emechara [More ...]
IMM onyeisi oche Ekrem İmamoğlu, Turkey Union of Municipalities ẹkenịmde ke Ankara na òkù "Smart Ọnọdụ na Municipalities Congress" jikọtara ejikọta. A ga-akpọrọ IMM maka ọrụ ya na akara. [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru, da Ọ nweghị ihe kpatara obodo a na-enweghị mmadụ, ebighi ebute ọdịmma ndị mmadụ ụzọ, na enweghị ihe ọmụma, amamihe na ebe nka. Anyị chọrọ obodo ndị ma ihe ma ndị ama ama. ” [More ...]
Antalya mepere emepe gbakwunyere na Kestel na Mahmutlar dị ọhụrụ na Alanya kwụsị ọhụrụ mechiri. N’izu gara aga, ọnụọgụ ndị ọhụrụ na-akwụsị elu ruru 10 na-akwụsị 8. Stations Alanyalý n'oge okpomọkụ [More ...]
KarFest, nke a ga-eme na nke mbụ n’afọ a na mmekorita nke Kocaeli Metropolitan Municipal na Kartepe Municipality, ga-ewere ọnọdụ na Sisli Valley na Satọdee, Jenụwarị 18th n’etiti 14.00-24.00. Ọtụtụ ihe omume, asọmpi na ogbo [More ...]
IMM arụala ụzọ eji arị ọhụụ na ube iji belata nza ndị njem nọ n’ọdụ ụgbọ mmiri Altunizade. Site na mmeghe nke Yamanevler - Çekmeköy Metro, ọnụ ọgụgụ ndị njem kwa ụbọchị na Altunizade mụbara site na 17 puku ruo puku 35. Istanbul [More ...]
Ngalaba na-ebugharị ụgbọ mmiri anọworị na oge ọrụ n'aka na mmụba maka mbupu na mbubata data n'afọ ndị na-adịbeghị anya. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile dị n'ụwa, ọkachasị na Europe, Eshia na Middle East [More ...]
Ọgbọ eletrik Inc. (EÜAŞ) General Directorate Assistant Inspector Entrance Exam. EUAS, dị ka akara KPSS ga-ekpebi ndị na-aga ime 200 ga-ekpebi mmadụ 10 na-enyocha ndị nyocha. Denye akwụkwọ maka nyocha maka mbanye ndị ọrụ a [More ...]
Gendarmerie na Coast Guard Academy ga-enweta ọzụzụ na ọzụzụ, Gendarmerie General Command na Coast Guard Command iji gboo mkpa ndị uweojii na-ahụ maka ọrụ nwoke na nwanyị ga-eme na ịntanetị n'etiti 16-31 Jenụwarị 2020. [More ...]
Otu egwuregwu bọọlụ Metro Istanbul nwetara ihe nrite nke atọ n'egwuregwu bọọlụ a haziri ahazi n'egwuregwu Egwuregwu Ibe Ọgụ na Obodo Metropolitan. Nnọ iri na asaa nke Metrolọ Mgbasa Ozi Obodo N'obodo Istanbul na Nnọkọ Njem Egwuregwu [More ...]
Mayor Ekrem Yüce, onye mere ihe nlere na Sunflower Bicycle Valley, nke ga-akwado asọmpi World Mountain Bike Marathon 2020, kwuru, sị: Olile anya na mwepu ndi mmeri [More ...]
Ememe Uluda Festival nke Uludağ, nke a na-akwadobe na nke anọ nke afọ a site na Bursa Metropolitan Municipality, ga-enwe n'etiti 8-9 February. Mayor Alinur Aktaş kwuru na ọgbakọ a nabatara ọtụtụ puku ndị amaala n'afọ gara aga. [More ...]
Kocaeli Mayor Assoc. Tahir Büyükakın, zutere ndị nta akụkọ na City Hospital na nri abalị mara ọkwa na nnyefe nke Ministry of Transportation nke Obodo Obodo Kocaeli Obodo Kotareli Tahir Büyükakın, [More ...]